चितवनमा डेङ्गुका बिरामी घटे – Saurahaonline.com
चितवनः भदौको तेस्रो र चौथो साता अत्याधिक देखिएको डेङ्गु रोगको संक्रमण घटेको छ । साउन पहिलो साताबाट क्रमशः बढ्दै गएको थियो । पछिल्लो एक साता डेङ्गुका बिरामी दैनिक घट्दै आएको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् ।
भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लिलाधर पौडेलका अनुसार भदौको चौथो साताको आईतबार भदौ २२ गते एकै दिन १ हजार नौ सय २२ जना बहिरंग सेवामा आएका थिए । जसमध्ये नौ सय मेडिकल विभागमा रहेकोमा धेरैलाई डेङ्गु संक्रमण देखिएको पौडेलले बताउनुभयो । सोही दिन अघिल्ला दिनहरुका तीन सय बिरामीले पुनः मेडिकल बहिरंग सेवामा स्वास्थ्य परीक्षण गराएका थिए ।
मेडिकल विभागका प्रमुख डा.प्रकाश खतिवडाका अनुसार त्यस दिन १ हजार २ सय ३० जना बिरामी हेरिएको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा क्रमशः बिरामी घट्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बिहीबार अस्पतालको बहिरंग सेवामा १ हजार ३ सय बिरामी आएका थिए । जसमध्ये पाँच सय हाराहारी मात्रै मेडिकल वार्डमा आएका थिए । तिनीहरु मध्ये ३ सय जतिलाई ज्वरोको संक्रमण रहेको थियो । ती मध्ये पनि केहीलाई डेङ्गुको संक्रमण देखिएको डा. खतिवडाले बताउनुभयो ।
पछिल्ला दिनहरुमा संक्रमण भएका बिरामी घटेको भन्दै उहाँले वर्षा बन्द भएसँगै आईतबार र सोमबार हेरेर संक्रमण दर भन्न सकिने बताउनुभयो । यद्यपी कात्तिक महिनासम्म डेङ्गु संक्रमण देखिने उहाँले बताउनुभयो ।
अस्पतालका बरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले भर्ना भएका एक सय जना बिरामी मध्ये ६० जना ज्वरोका हुने र तिनीहरु मध्ये ६० प्रतिशतसम्म डेङ्गुका हुने गरेकोमा घटेर १५ देखि २० प्रतिशतमा झरेको बताउनुभयो । यद्यपी मौसमी ज्वरो भने रही रहेको छ ।
लगातार परेको वर्षाले तापक्रम घटेका कारण डेङ्गुको संक्रमण पनि घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका किट नियन्त्रक राम केसीका अनुसार साउन यता बिहीबारसम्ममा जिल्लामा बिरामीको संख्या २ हजार ५ सय १५ जना पुगेको छ । ८ हजार २ सय २१ जनाको रक्त परीक्षणका क्रममा सो संख्यामा संक्रमित भेटिएका हुन् ।
भदौ चौथो सातापछि क्रमशः संक्रमितको संख्या घट्दै गएको केसीले बताउनुभयो ।